Madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Oo Difaacay Musharaxnimada Madaxweynaha Iyo Ku-xigeenimadiisa Oo Toddobaadkan Mugdi Fuulay | Somaliland Today
← Siyaasiyiin Ka Mid Ah Xisbiga KULMIYE Oo Wasiirrada Xukuumadda Ku Xidhiidhiyey Warar Madow Lagu Galiyey Musharaxnimada Madaxwaynaha
Kalamaanka Wargayska Somalilandtoday Muxuu Ka Yidhi Khudbadii Qiimaha Lahayd Ee Madaxwaynaha Somaliland Ka Jeediyay Shirkii Ganasiga Somaliland?? →
Madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Oo Difaacay Musharaxnimada Madaxweynaha Iyo Ku-xigeenimadiisa Oo Toddobaadkan Mugdi Fuulay
(SLT-Hargeysa) – Madaxweyne ku-xigeenka Somaliland, ahna kusimaha Madaxweynaha Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici, ayaa si adag u difaacay inaanu Madaxweyne Siilaanyo ka tanaasulin Musharaxnimada Madaxweynaha shanta sanno ee soo socda ee Xisbiga talada haya.
Saylici oo shalay ka hadlayay Xaflada ka dhacday magaalada Hargeysa, ayaa caddeeyay inuu isaguna u taaganyahay mar kale Musharaxa Madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga Kulmiye.
Madaxweyne ku-xigeenka ayaa sidoo kale gaashaanka ku dhuftay wararka sheegaya inuu Madaxweynuhu tanaasul bixiyay, waxaanu yidhi “Waxaa jiray warar suuqa soo galay oo lagu yidhi Madaxweynaha ayaa Musharaxnimo ka tanaasulay. Wararkaasi warar sal iyo raad toona leh maaha, Madaxweyne Axmed Siilaanyo waa Musharax,Xisbiga Kulmiye waxaa u musharaxiin ah Madaxweynaha iyo Aniga,sida Dastuurka dalkeenu siinayo, dadkayna u taalaa inay noogu ceshaan iyo inkale laakiin musharaxiintu Axmed Maxamed Siilaanyo iyo Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici weeyaan”ayuu yidhi.
Xukuumadda ayaa maalmihii ugu dambeeyay dhawaaq dheer ku daadifeynaysay jiritaanka warka tashuushka geliyay Musharaxnimada Siilaanyo iyo ku-xigeenkiisa. Waxa kale oo warka meesha ka saaray xataa in laysla soo hadal qaaday hoggaanka Xisbiga taladda haya ee Kulmiye.
Hase ahaatee hadalka ka soo yeedhay Madaxweyne ku-xigeenka ayaa yimid, xilli ay dibada u soo baxayso hadal hayn sheegaysa in Musharax madaxweyne ku-xigeenka ee Kulmiye loo wado Prof. Axmed Ismaaciil Samatar oo ah siyaasi dhawaan ka soo laabtay aragtida soomaliweyn, balse wali dibada ka jooga saaxadda Siyaasadda ee Somaliland.
Prof. Samatar oo sanadkii la soo dhaafay markii uu Somaliland yimi dalka oo dhan ku wada maray socdaal loo turjuntay siyaabo kala duwan, balse natiijadiisu aanay dareen siyaasaddeed kicin, ayaa mar walba u muuqda inuu roocaadinayo sidii uu Mansab uga qaban lahaa nidaamka soo socda.
Mansabka Prof. Samatar lagu dhererinayo inuu doonayo ayaa ka miisaan culus Wasiirnimo ama xilal la mid ah oo hoose, balse waxa ay dadka siyaasadda odorosaa qabaan in raadinayo fursad uu Musharax madaxweyne ama ku-xigeen isugu sharixi karo, taasoo dadka tooshka aragtida dhow wax ku eegaa, ay haatan cabirayaan inuu soo jeleecay Damaciisu, markii ay soo dhawaadeen Doorashooyinka Madaxtinimadu.
Si kastaba ha ahaatee marka laga tago doodda siyaasaddeed ee ay todobaadkan warbaahintu ka furtay Musharaxnimada Madaxweyne Siilaanyo, waxa iska cad inay wali caydhin ay tahay doorashada Musharaxa Madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ee xisbiga kulmiye u tartami doona doorashada soo fool leh ee 2015, hadii ay dhacdo.
Taasoo sida Xeerarka Doorashooyinka Somaliland jidaynaynayaan xisbi walba looga baahanyahay laba Musharax oo u taagan Madaxweynaha iyo ku-xigeenka